AKHRISO: Xildhibaan Mahad Salaad oo eedeyn u jeediyay Wasiir Beyle si deg deg ah fariin ugu diray Jawaari – Marqaanmedia24.com
AKHRISO: Xildhibaan Mahad Salaad oo eedeyn u jeediyay Wasiir Beyle si deg deg ah fariin ugu diray Jawaari
February 13, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 8
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadal ka soo yeeray Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya Dr. C/raxmaan Ducaale Beyle.
Wasiir Beyle ayaa la sheegay inuu sheegay in haddii aysan ganacsatada bixin canshuurta badeecadahooda kala soo degayaan Dekadda Kismaayo.
Qoraal Kooban o Xildhibaanada Mahad Salaad soo dhigay Facebooka ayuu ku sheegay in hadalkaasi uusan ahayn mid mas’uul Dowladeed ku hadlo.
Halkaan Hoose ka Akhriso Qoraalka Mahad Salaad:-
Waa wax aad looga xumaado hadalka kasoo yeeray Wasiirka Maaliyada ee ah “in ganacsatada reer Mogadishu hadii aysan bixinayn lacagta lagu soo rogay ay badeecadooda kala soo dagaan Dekada Kismaayo”. Hadalkaasi ma’ahan hadal qof mas’uul dowladeed ah uu ku hadlo, waana in Wasiirku raali gelin ka bixiyaa.
Sidoo kale waxaan ka digeynaa in Wasaarada Maaliyada qaado lacago baad ah oo aan waafaqsanayn nidaamka maaliyadeed ee dalka u yaala.
Annagu ma diidanin in dowladu canshuur qaado lkn canshuurta waa in ay leedahay sharciyad lagu qaado, dalka oo dhana laga qaado oo reer Mogadishu kaliya aan lagu gaar yeelin.
Sidoo kale waxaan ka codsanaynaa Gudoonka Golaha Shacabka in kalfadhiga Golaha Shacabka xiligiisii lagu furo oo aan dib loo dhigin si loo dardar geliyo howlaha u yaala Golaha.
SAWIRRO: Guddoomiye Yariisow oo dhagax dhigay Xarunta degmada Yaaqshiid
XOG; Halkuu ku danbeeyaa Khilaafka u dhaxeeyay MD Farmaajo iyo RW Kheyre?
Waddan walba dakhliga canshuuraha iyo ganacsiga dawlga uga soo hoyda ayuu wax dal ku yahay oo uu ku shaqeeyaa. Muwaaddin kasta oo xalaal ahi dalkiisa xaquuqdiisa kama hagrado ee wuu ugu hagar baxaa. Waa dhaqan xumo iyo gunnimo laga yaqyaqsoodo in uu ruux muwaaddin Soomaaliya ahi dalkiisa inta uu ka taajiro haddana in uu dib wax ugu celiyo kala bakhiila.
Sidaas oo ay tahay, dawladda federaalka iyo dawlad geyiyeedyadu waxaa looga baahan yahay in ay heer dawli ah ku nidaamiyaan oo wada dajistaan hannaan canshuureed oo is waafaqsan. Waxaa weliba laga ma maarmaan iyo maamul wanaag ah in hannaanka canshuureyntu uu ahaado mid tixgalinaya itaalka shacabka geyiyada ku kala nool ee duruufaha iyo baahiyaha geyi kasta u gaarka ah salka ku haya, sababta oo ah in aanay geyiyadu dhaqaalaha iyo dakhliga ka sinnayn. Waa qodobka loo yaqaanno “Progressive Taxation”.
Nations all over the world employ civil servants who are well grounded in their field of expertise and knowledge to run the affairs of the state in every government agency. It beats me why Somalia is not doing what is an international norm everywhere instead of political leaders constantly engaging in pathetic cat fights, in full public view, over matters of administrative nature which should be the realm of civil servants.
Mahad Salaad waxaa lagu sheegaa in uu ka mid yahay kuwa habar gidir ee markastaba ka hor jeeda dawladkasta ee loo soo dhiso soomaaliya.Sababtoo ah kooxda uu ka mid yahay waa kuwa an rabin danaha soomaaliweeyn ee eeganaya kuwa ayaga u gaarka ah.Mahad waxuu ka mid yahay kooxda habar gidir ee an marna joogin mucaaradka joogtadaa ee ay ku baadi goobayaan danahooda khaaska u ah.Kama wado haddii ay dawladuhu qaladaad leeyahiin yaan la sheegin,ee ujeedadaydu waa maxay markastaba kooxda habar gidir kaligeed u soo taagan tahay?Madaxda habar gidir kama hadlaan oo maba dareensana in ay ayagu bur-buriyeen dawladii hore ee soomaaliya.In ay diideen tii dawlad ugu dhaweeyd ee uu hogaamiyaha u ahaa Cabdullaahi Yuusuf.In ay xasuuqeen kumaakun qof oo soomaali ahaa.In ay afar bilood ka hor dab ku shideen shacab soomaaliyeed oo ay halkaas ku gubeen ugu yaraan #530 qof.
Qaar weli qaddiyadihii dhicisoobay ee USC iyo SNM dacalka ku sii dhaggan baa hoostaas is kala socda oo waxan oo sawaxan ah soo hurinaya. Sida khubarada dhimirka u qaabilsan laga hayo dadka mintidka ahi waa macangagyo aanay gari galin oo ka bixin. Marka ay qaddiyad waaqiciga ka baxsan sida ta qabiiliga ah mise siyaasadda dareenka cunsurnimo ku salaysan cabsan yihiin ka ba sii daran oo loo maba taag helo sidooda ba waayo waa nin ay meel baasi u caddahay meesha rooni ka madoow. Qaranka Soomaaliya waxaa Eebbe ku badbaadin karaa shacabka xalaasha ah ee jacel oo u daneeya iyo hayadaha dawliga; dastuurka; qawaaniinta; xeerarka iyo sharciyada qaranka la dhammeystiro oo lana dardar galiyo. Markaasi nidaamka jira ayaa mumin iyo munaafaq kala saari lahaa oo lagu kala bixi lahaa.
Waa ayaan darro in dad yar ay jecelaan lahaayeen inay Somalia dunto oo baaba’do. Wallaahay waa wax laga naxo oo laga xumaado.
Dr Bayle waa halyey Somaaliyeed oo tubtii toosneyd ku ridey maareynta maaliyadda dalka. Wuxuu caan ku yahay “transparency” iyo “Accountability” waxaa u weheliya aqoon dheeraad ah.
Anigu qof baan ahayoo wasiir Beyle meel gaar ah ayuu iagaga yaallaa. Haddii ay dawladdu ka qaaddo wasiir Beyle xilka waxaan u aqoonsanayaa Dawladdani inay tahay mid musuq maasuq rabta.
Wixii Dr Beyle neceb waa tuugo rabta inay wax dhacaan waxna boobaan.
Allow Xafid DR Beyle.
Mahad salaad waa mooryaan dawlad wlbana wukasoo horjeeda isga iyo rerkisu muqdisho canshuurta laga qaado iyadaa aminigeeda lagu sugaa mushahrna waxaloo siyaa cidanka amnigeeda suga.
Maamulada kale iyagaa canshurtoda iyo amnigooda sugta xaqna uleh dalkuna waa federaal.
Puntland waxey mushahar siisaa cidanka badan 10kun iyo madaxda o dhan adaxweyne ilaa shaqale hoosaad xamarna canshur ugama baahna kuwo badan ku qaraabta xamar ayaa canshuur laga qaadaa hadee yeysiiya ? Mgaca somalida waxa lagusoo qaado xitaa xamar madhafaan wana laydin dayey idnkii ayana calcalaya mar walba gah gah gah gah gah gah gah
Somaaliyi inay xisaabtanto waa lagama maarmaan. Maalmahaan waxaa soo noqnoqoneysey Xamar cashuurta laga qaado waxaa la siiyaa gobolada kale.
Hala xisaabtamo oo Xamar halala xisaabtamo. Hala weyddiiyo waxa xaq u siiyey in lacagaha deeqaha oo dhan aysan Xamar soo dhaafin waayo? Ma dawladihii deeqda bixiyey yaa yiri Xamar keliyaa iska leh?
Ma xaqbaa in Jaamacadihii la dhisey oo dhan Xamar keliya laga dhiso? Cusbitaaladii waaweynaa sidoo kale. Mashaariicdii waa weyneyd oo dhan sidoo kale.
Ardeyga Zeylac markuu ku dhamaysto middle school Xamar buu usoo raadsanyey Dugsi sare,
Jaamacadaha sidoo kale…
Maxaa lagu ilaabay dalka intiisii kale ee aan ka ahayn Xamar????
lixda billion ee Somaali lagu leeyahay kuli Xamar bay ku maqan tahay…
Xamar ama reer Benaadir waa inay iska bixiyaan
xaqii Somaalida inteeda kale.
Waa haddii caddaalad laga hadlaayo.
MAHAD SALAAD,MOORYAAN MEDIA NAGA DAAYA SHAQSIYAAD AAN B IYO T MIDNA AHEEYN IN AAD WAX NOOGA DHIGTAAN,CAYAALKI DARBI JIIFKA OO MOORYAANIMO SHILIMAAD KU HELAY SIDAA mP KU HELAY AYAAD INOO BUUN BUUNISAAN,WHAT HE NEED TO DO IS TO SHUT UP,WAX WALBUU MURAN KA WADAA DOWLADAAN KEENTO,ADEER DOWLADAAN WAA LA DOORTAY 4SANO AYADAA HOGAANKA ISKA LEH,FOLLOW IT UP,MUCAARADNIMO MAAHA CAAC INAA ISKA TIRAAHDO TALAABO WALBO WAA IN AAD ARGUMENT LA IMAADA WAX MACQUUL AH OO U WANAAGSABN DALKA IYO DADKA,LAAKIN WAX MA SHEEGAYSID MAALIN WALBANA WAXBAAD KA HADLAYSAA,NAGA DAA BILAA CALEEYK MOORYAAN MEDIANA HADALKAAGA MA DAAYAAN ILLEN WAX KALOO NOO SHEEGAAN MA HAYAANE.